Izu ụka a: Indianapolis mmalite izu ụka | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 2, 2008 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Mbido izu ụka bụ mmemme 54 hour siri ike nke na - ejikọ ndị mmepe weebụ nwere nnukwu mmụọ na mkpali, ndị njikwa azụmaahịa, ndị na-ese ihe nkiri, ndị ahịa ahịa, na ndị nwere mmasị ịmalite ịmalite ụlọ ọrụ site n'echiche ịmalite!
Indianapolis ga-akwado mmemme mmalite nke izu ụka ya na Disemba 5th? 7th na Purdue School of Engineering and Technology na ogige IUPUI na ogbe ndịda.
Ihe omume a bidoro na 5 nke mgbede na Fraịdee Disemba 5th na asọmpi ebuli elu. Ndị sonyere na-eme ntuli aka na ụlọ ọrụ ha ga-achọ ịmepụta ma kpọkọta n'otu ìgwè dabere na mmasị na usoro nka. Ndị otu na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ha dị iche iche na ngwụsị izu na-ejedebe na ngosiputa nke ngwaahịa na mgbede Sọnde Disemba 7. A na-anabata ndị na-etinye ego maka ịbịa ihe ngosi ikpeazụ.
Na mgbakwunye na ndị sonyere, mmalite izu ụka ga-ekwe omume site na mmesapụ aka nke ndị na-akwado ego na mpaghara mpaghara. Nlekọta ihe omume a na-achọ ndị na-akwado ya ugbu a iji nyere aka belata ụgwọ nke nnabata mmemme ahụ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịghọ onye nkwado ma ọ bụ ịchọrọ ịmatakwu ihe omume ahụ biko gaa na weebụsaịtị na http://indianapolis.startupweekend.com/.
Mbido izu ụka bụ ezigbo ebe ọ bụghị naanị ka gị na ndị ọrụ ibe gị na-akpakọrịta ma na-eme nkà na ọdịmma gị n'ihe gbasara ezigbo azụmaahịa. Oge izu ụka Indianapolis ga - eme Indiana steeti izizi ijide izu ụka atọ? kwuru Lorraine Ball, Onye isi ala nke ndị na-eme mmiri ozuzo na onye guzobere Roundpeg Marketing
Mbido izu ụka, LLC sitere na Boulder, Colorado ma na-eme ihe omume ngwụcha izu site na obodo gaa na obodo dịka a tụrụ vootu na weebụsaịtị ya, http://startupweekend.com/.
Gara aga Indiana mmalite Izu ụka ihe na-ẹkenịmde ke Bloomington, IN na West Lafayette, IN. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ụlọ ọrụ ndị e guzobere n'oge ngwụsị izu gara aga na-adabere na weebụ ma ọtụtụ abanyela na-aga ahịa.
Tags: Guy kawasakimkpebiSocial Media Marketingndị na-ede akwụkwọ